Luxembourg - ikpeazụ Grand Duchy nke ụwa - 1aviagem.com
Edebere 2 October 2019 site Römulo Lucena
Luxembourg bụ obere mba na Europe, agbataobi France, Belgium na Germany.
Gịnịkwa mere o ji baa uru ileta?
N'ihi na ọ bụ Grand Duchy ikpeazụ nke ụwa. Ma ị nwere ike ịnọ na-eche: gịnị bụ Grand Duchy? Azịza dị mfe: Ọ bụ mba nke, kama ịhọpụta onye isi ala, nwere nnukwu duke nke na-achịkwa ya, ndị ga-esokwa n'ọgbọ gafere n'ọgbọ ọzọ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ "obere eze". Ma ee, aha a sitere na ndi amara aha ha.
Enweghi ike ịmata aha ndị isi bụ:
Emperor 1 (Siza, Cacer, Tsar)
Ihe ngosi 3
Onye isi ala nke 4
Onye isi oche nke 5
7 Onye isi
Archduke nke 9
10 Grand Duke (nke a bụ ebe a)
Marquis nke 13
Ọ dị mma, laghachi na isiokwu: Gịnị kpatara o ji baa uru ịga leta Luxembourg?
N'ihi na ọ bụ obere mba, ị ga-aga nke ọma, ị ga-ahụkwa sinima.
Site n'ụzọ, Luxembourgish na-asụ asụsụ “ejikarị” 4: French, German, Luxembourgish na Bekee. Yabụ ọ bụrụ na ị na-asụ otu n'ime asụsụ ndị a, ha ga na-ejere gị ozi nke ọma.
Obodo Luxembourg dị obere (isi obodo nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba niile) ebe ha nwere naanị 2.586 km². Nke nyere ihe na-erughị ọkara nke Federal District nke nwere Brasilia, isi obodo Brazil. (5.802 km²).
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bara uru nleta.
Echekwara m n’ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ n’otu stopover Na Europe ị nwere ike ịmara.
(Knowmata ihe ọ bụ na otu esi eme ka stopover pịa ebe a)
Uzo esi aga.
Na-agagharị na Luxembourg. E nwere ụzọ abụọ n'ụzọ bụ isi.
Nke mbụ bụ ụkwụ. Ọ bụrụ na anyanwụ mara mma n'èzí, ọ naghị ekpo oke ọkụ ma ọ bụ jụọ oyi, ihe a na-atụ aro bụ ịga ije n'okporo ụzọ, karịsịa n'akụkụ obodo ochie.
Nwere ike ịnụ ụtọ ncheta ndị ahụ ma rute ọtụtụ ebe ngwa ngwa.
Cheta ka iburu sweta mgbe nile! Na Luxembourg, ihu igwe na-agbanwe ngwa ngwa, anyanwụ na-apụta, snow na-abata, mgbe ahụ mmiri na-ezo, ụbọchị niile!
Ebe a mara mma nke ukwuu, ị ga - enwe mmetụta dịka agwa sitere na ihe nkiri mgbe ochie ebe enwere ọmarịcha ala na nnukwu ụlọ dị n'akụkụ ugwu. Na echiche dị ụtọ. Ha na-ekwudị na ha nwere “mbara ihu mara mma kacha mma na Europe”. Na anyị ga-egosi gị obere oge.
Ugbu a ọ bụrụ ihu igwe gbanwere na mberede wee malite ịbanye na snow, aro ahụ bụ ka iji ọrụ bọs na-eme njem.
Yingzụta tiketi na-enye gị ọtụtụ nhọrọ. anyị zụtara tiketi zuru ụbọchị ka anyị ga-anọ ụbọchị abụọ. Ojiji nke tiketi a dị irè maka awa 24 ma malite ịgụta tiketi ụgbọ ala. Yabụ ọ bụrụ na ị banye na 16: 00, ọ na-aga ruo mgbe 16: 00 n'echi ya.
Achọpụtara n’elu elu bọs ahụ yabụ ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnụ ụtọ snow, ịnwere ike nọrọ na ya mgbe ị na-eme njem.
Ma ọ bụrụ na echiche a ga-eme ka okpomoku dị n'okpuru ala dị mma, n'ihi na ọ nwere igwe ọkụ. N'ime otu ụgbọ ala ahụ enwere ụda n'ime asụsụ 4 ọ bụla maka ịnụ ka ọ na-aga.
Ọ bụrụ na ịhọrọ bọs ahụ n'ọnụ bụ ime ụzọ ahụ dum, ma ọ ga-awụli elu ma rịgoro ebe nke mmasị. Ọ naghị ewe oge ịbanye bọs, ihe dịka otu awa na ọkara. Ozugbo i kpebiri ebe ichoro iso ebe ahụ cheere nke ugboro abụọ ma wụda na nkwụsị nke ebe a họọrọ. Nwere ike gbadata ma ala karịa oge ole ịchọrọ.
Ọbụna na windo dị nso n’ebe a na-echeta “Nwanyị Nwanyị Na-ahụ Maka Mma” anyị bụ́ ndị Brazil na-ezute ndị Portuguese na Luxembourg! Jeez zuru ụwa ọnụ.
Ah, ị nwekwara ike ịgbazite ụgbọ ala na Luxembourg, ọ bụghị nhọrọ akụ na ụba kachasị, mana enwere ike. Ka emechara anyị nọ na Grand Duchy. Ọ ga-abụ ezigbo ahụmịhe.
Ebe ị ga-eleta na Luxembourg.
Ugbu a ị marala aga aga ka anyị depụta ebe ụfọdụ ị ga-eleta. Will ga - ahụ na ọ bụ ikwubiga okwu ókè ikwu na mba a yiri akụkọ ọdịnala mgbe ochie.
1- Central Square
Dịka ebe nlere etiti etiti ebe bụ ebe akụkọ ihe mere eme ga-adị. N'ezie, m na-atụ aro na ọ ga-abụ mmalite.
Site na square a, bọs na-agba ma njem ọha na nke ndị njem.
N'ime ya bụ:
2- Ntughari Udiri Anya nke Ndi Nwanyi.
Ọ bụ ihe ncheta nke ndị agha nwụrụ n'oge agha ụwa nke mbụ na nke abụọ.
Whonye bụ nwanyị nwanyị ọlaedo ahụ? Ọ bụ "Nwanyị nnwere onwe" nke na-anọchite anya nnwere onwe nke Grand Duchy mgbe agha ahụ gasịrị.
Ọ nọ na ụkwụ nke mita 21. Yabụ enwere ike ịhụ ya site n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe a na-ekwu okwu ya.
Na ntọala nke ihe ncheta nke Golden Lady anyị nwere ọnụ ọgụgụ abụọ na-anọchite anya ndị agha na ndị nkịtị nke agha na ederede a:
"Enwere m mpako na ndị ọrụ afọ ofufo anyị nwere ihe atụ nke ndị isi ha site na agha ikpeazụ ahụ sonyeere ndị agha jikọtara aka na-agbachitere ha na-akpata obere ala anyị. Ekelere m ndị e merụrụ ahụ na ndị dike nke ala nna na uju nke ezinụlọ ha.
Ọbara gị agaghị awụfu n’efu. Ha kwụrụ site n’ọnwụ na n’elu nkewa nke otu, klaasị, na nkwupụta, enwere eziokwu na ọnọdụ zuru oke maka anyị niile, ala nna Luxembourg. Grand Duchess Charlotte 16 Eprel 1945".
3- Nlele nke etiti etiti.
N'ime ya ị ga - ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ “obodo niile” (Cheta na ụlọ ndị dị n'elu ugwu, nke a bụ akụkụ mbụ).
4- Katidral Notre Dame nke Luxembourg.
Ọ bụrụ n’ịmabeghị ma French Notre-Dame na-arụzigharị ọkụ, ọ gbara ọkụ. Ezigbo uzo ozo ị gara bụ Notre-Dame Luxemborger.
Ọ dị mma ịhụ nkọwa ndị ahụ, enwere mmụọ ozi, dragons, iko mara mma, akụkụ ahụ ochie, nke na-eme ka akụkọ akụkọ mara mma karịa. You ka nwere ike ikoo n'ime ya. Mana cheta ime mkpọtụ ọ bụla, ma ghara iji ọkụ n'ime foto ndị ahụ ebe ọ bụ na enwere òtù nzuzo na-aga, nke a nwekwara ike ịdọrọ uche ndị nọ na ya. Nwee ọ Enjoyụ, mana cheta na ị nọ n'ebe dị nsọ nke kwesịrị nsọpụrụ.
Adolphe Bridge bụ àkwà mmiri mechara mechara nwee akwụkwọ ozi obodo. Ọ jikọtara Obodo dị elu na Plateau Bourbon, ọ dịkwa ihe dị ka mita 50 dị elu.
Ruo ogologo oge, a na-ahụta ya bụ nnukwu àkwà mmiri n'okpuru arche ụwa. Mana ọ dịla ihe karịrị otu narị afọ, o nwere ike ịbụ na ọ ga-abụ na ndị ọzọ na-achịkwa ya.
6- Museumlọ ngosi nka nke Art Art ugbu a na Luxembourg akpọ: MUDAM
Otu ihe ị na-agaghị echefu na Luxembourg bụ ebe ọdịbendị ma na nke a ma ọ bụrụ na ebe ị na-elekwasị anya bụ ọdịbendị, anyị na-atụ aro ịme izu na MUDAM mana ọ ga-ewe oge iji mara ya nke ọma, n'ihi na ebe ahụ buru nnukwu ibu ma nwee ọtụtụ ihe ngosi.
7- Grand Ducal Obí
Obí Grand Ducal bụ ebe Grand Duke bi. Maka ebumnuche nchekwa enwere ike imechi ya, mepee naanị n'oge ọkọchị maka nleta. foto dị n'aka nri bụ nke nwere ụlọ nche kachasị elu. O di nwute na emechiri ya obia mgbe anyi no.
8- Chemin de la Corniche (Balcony Kasị Mma na Europe)
Chineke m, nke a bụ n'ezie ebe kachasị mma na obodo a, mbara ihu kacha mma na Europe. Kwesịrị ka ị na-atụ uche otu ehihie ebe ahụ. Ma anyị ka nwere mmetụta ọzọ! Idem ama akpa nnyịn akpa! Ya mere, anyị nọrọ na akụkọ ọdịnala mgbe enwere snow! Ahụrụ m ahụmịhe ahụ n'anya, mana snow dị mma? Ọ dị oyi ma ị ga-akpachara anya mgbe ị na-eje ije.
A na-elekwa anya ebe ahụ.
Mgbe iteta n'ụra ahụ ọ bụ oge ịchọ ebe dị mma iji gbaba. Site n'ụzọ ọbụna igwe ahụ malitere ifriizi Ma ọ ka ewetara foto dị mma?!
Iji kpoo ahụ ọkụ, anyị gara mpaghara ebe a na-ere nri nke dị na ụlọ ngosi nka.
Nakwa uru maka nleta ma ọ bụrụ na ịchọrọ iweta ihe ncheta.
9- Neumünster Abbey Ebe a aha dị iche nwere akụkọ mgbe ochie.
E wuru ya nke mbụ na narị afọ nke asatọ, wee bụrụ ebe izizi nke ọka a ma ama dị. Obodo emepeala. Mana na 1542, ebibiri ya, ma ndi ewuru ya ndi wuru ya Neumünster.
Agbanyeghị na 1684 etiti ahụ gbara ọkụ ma wughachi ya na 1688.
N’oge mgbanwe nke French ọ rụrụ ọrụ dịka ụlọ mkpọrọ. Mgbe Agha IIwa nke Abụọ biri, ọ malitere ịrụ ọrụ dị ka ọdụ ndị uwe ojii. Na 2004, o burulaala omenaala ọdịnala mepere emepe ọha mmadụ nke nwere nchịkọta nkeonwe site n'aka ndị omenkà dị iche iche. Ihe ngosi a na-adịgide adịgide.
A na-akpọ taa: Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumunster (CCRN)
Ma ọ bụ ụlọ kachasị ukwuu na eserese mbara ihu kacha mma n'ụwa.
N'ikpeazụ, oge eruola ikwu okwu ga-aga nke ọma, kpoo ma gaa n'okporo ụzọ.
Maka nke a anyị gaa n'isi nke iri anyị.
10- Stationlọ Ọrụ Ọgbọ Central: ma ọ bụ Gare Centrale, ma ọ bụ Mobilitéitszentral
Ọ bụ ọdụ na-achọ ntinye ọnụ. O nwere free WiFi, na-ekpo ọkụ ma dịkwa mma.
Site n'ụzọ, a dọọ m ndị njem aka na ntị, enweghị mkpọtụ banyere ụgbọ ala na-apụ, ọ dịịrị gị ịnọ ịnọ n'elu ikpo okwu ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Ha na-agwa ndị mmadụ ka ha na-abịa n'oge ka ụgbọ oloko na-apụ n'oge.
Na nke anyị, anyị nwere ihe ịtụnanya ọzọ. ụgbọ oloko a kagbuo na naanị otu ahịrị pụtara na panel na-ebipụta oge. Ikekwe nsogbu snow, amaghị m ihe mere.
Anyị laghachi na windo ma jụọ maka ego ahụ, onye ode akwụkwọ weghachiri anyị ego ahụ na-akpachapụghị anya. Anyị zụtara tiketi ụgbọ oloko ọzọ na Brussels n'oge ọzọ. O rere anyị ọzọ. Nke a dọtara m uche n'ihi na ọ nweghị oge ọ nwara ịse ihe ọ bụla, ịbanye na nsogbu, ịrịọ megide ihe akaebe na-akagbuola ụgbọ oloko ahụ. Daalụ maka okwu anyị na tiketi, n'ezie. Kemgbe ọ bịara Canada, o nwebeghị mmetụta nke a, na okwu ya nwere ike, ọ bụghị akwụkwọ. Ma eleghị anya anyị nwere ike iru ọkwa a ebe a na Brazil?
Nke a mere, anyị wee banye ụgbọ oloko nke ọzọ ma anyị ga-aga Brussels, ana m agbachiri foto nke ụgbọ oloko ahụ anyị jere.
Ọ bụrụ na ị masịrị ịdenye aha na blọọgụ ị ga - akwado blog a n'efu. Ga-adọ aka na ntị banyere ọkwa ọ bụla, ọ bụkwa ụdị nkwado dị mkpa maka onye edemede a. Naanị pịa bọtịnụ “soro” uhie na nkuku ihuenyo ahụ site na email wee gosi na email na ị bụ mmadụ.
Nnukwu mmakọ ruo mgbe ọ bụla ọzọ post! Can nwere ike ị na-eleta ụwa anyị ebe ahụ.
Olee otú Nwanyi ọla edo Europa Akwa Duchy Luxembourg artlọ nka ọhụụ nka aha adighi nma akwa adolphe mbara ihu kacha mma na Europe